မွဲဆၧအမုၬအီၪလၧနၥံၪအလီၩ့ဆံၭ | Radio Veritas Asia
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, လၧမုနွ့ၫနံၩအထးဖၧၩ့မုခၪ့ထံၭအနံၩနီၪ ဘၪလၧမုဂၪလၩ့တၭ, အထံၩအဖျဲၥံၪ ၥၭမဲၪၦယုဒၫဖိၪအကၠီၩ့နီၪ, အီၪကိၩ့အီၪကီၪ့ကၭဘံၭထၬတရၫ့ဂီၩ့ယူၭတၭ, ယ့ၫၡုၬဂဲၫဆၧၫ့ထုၪ့လၧအၥၭ ကျၩတၭ, စံၭအဝ့ၫၥံၪ, မွဲဆၧအမုၬအီၪလၧနၥံၪအလီၩ့ဆံၭ.
စံၭဆၧနီၪတၭ ဒုၭနဲၪအဝ့ၫၥံၪလၧအစူၪယၫၥၭ ဒဲအဂုၬဖၩလီၫ.မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, အထံၩအဖျဲၥံၪဒၪ ဘၪအကဆါနီၪ အၥုၪ့ထိၬအၥၭထိၬထၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ယ့ၫၡုၬစံၭဒီၭအဝ့ၫၥံၪ, မွဲဆၧအမုၬအီၪလၧနၥံၪအလီၩ့ဆံၭ. ဘဲၫယဖါအၪ့မၧၫ့လၩ့န့ယၧၩအၥိၭနီၪ, ယမိအၪ့မၧၫ့လၩ့န့နၥံၪဘဲၫနီၪအၥိၭဆ့လီၫ.
အဝ့ၫဒၪစံၭဆၧလဖၪနီၪဂီၩ့တၭ, ၥၪၡိၪလၧအဝ့ၫၥံၪအလီၩ့တၭ, စံၭဝ့ၫဒၪ, ဒိၭန့နၥံၪဝ့ၫၥၭမုဆံၫ့ဎံၪနီၪဆံၭ.- ထီးဒၪၦၡၩအဆၧမၪ လၧနၥံၪကွဲၪဖျါခွံၬဝ့ၫလဖၪနီၪ မိဘၪကွဲၪဖျါခွံၬ အၥၭလီၫ. ထီးဒၪၦၡၩအဆၧမၪလၧ နၥံၪဖီၪ့ထၬလဖၪနီၪ မိဘၪဖီၪ့ထၬအၥၭဆ့လီၫ.
လၧယ့ၫၡုၬဂဲၫဝ့ၫနီၪ ၦအီၪလၧလဆံၫနံၫဂၩအကျၩ, စထီမၭ(ကိၭဝ့ၫလၧစဒံၭဒမၧၭ) လဂၩအီၪလၧအဝ့ၫၥံၪအၥိၭအ့ၬ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, အထံၩအဖျဲဂူၫဂၩလဖၪစံၭအဝ့ၫနီၪ, ပဝ့ၫဒၪယီၩ ပဒၪဘၪယူၭကဆါယူၭ. အ့ၪမွဲအဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ, ယအ့ၪလဒၪဘၪ ထၭအလးလၧအစူၪယၫၥၭအဖၧၩ့, ယအ့ၪလအီၩ့ဘၪအဖၧၩ့လးနီၪ လၧယစူၪနိၩ့တၭ ယအ့ၪလဘူၭဘၪအဂုၬဖၩအဖၧၩ့လးလၧယစူၪနီၪ ယနဲၩယဝ့ၫအ့ၬ.
အယီၩအလးခဲၫ့ဎိၭၥၫ့နီၪ, အထံၩအဖျဲၥံၪအီၪဒီၭလၧအဖၧၩ့နီၪ, စထီမၭအီၪလၧအကျၩလီၫ. တရၫ့ၥံၪ ကၭဘံၭထၬအၥၭဂီၩ့ယူၭတၭ, ယ့ၫၡုၬဂဲၫဆၧၫ့ထုၪ့ လၧအကျၩနီၪ, စံၭဝ့ၫဒၪ, မွဲဆၧအမုၬအီၪလၧနၥံၪအလီၩ့ဆံၭ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ စံၭစထီမၭ, ယူၬစိၩနစူၪနိၩ့ထီးယီၩ ယိယစူၪယၫၥၭယီၩတၭ, ယူၬစိၩနစူၪထီးယီၩတၭဘူၭယိခွါ ယဂုၬဖၩအဖၧၩ့လးယီၩဆံၭ. ၥၭနီၪမွဲအထီးဂံၩ့ဂၩ့လဂ့ၩ, နဲၩဆၧဆံၭ.
စထီမၭချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ, စံၭအဝ့ၫ, ယကဆါ,ဒဲယယွၩမၬကၨ.- ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ, မွဲနဒၪဘၪယၧၩအ ကၠီၩ့တၭနနဲၩနဝ့ၫ, ၦလၧအလဒၪဘၪဝ့ၫလါနၫ့ဘိၩနဲၩ ဝ့ၫလဖၪဘၪဆိၪဂ့ၩဝ့ၫဒၪလီၫ.
ဆၧလၩ့လၭလၧအဂူၫဂၩ လၧအလကွ့ၭဘၪအၥၭ လၧလံၬယီၩအဖၧၩ့, ယ့ၫၡုၬမၩဝ့ၫလၧအထံၩအဖျဲၥံၪ အမ့ၬယၫအၪမံၩ့လီၫ.- ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိနဲၩလၧ ယ့ၫၡုၬမွဲဎရံၬ, ယွၩအဖိၪခွၫနီၪ, နၥံၪနဲၩဆၧအကၠီၩ့တၭ, နၥံၪမိန့ဘၪဆၧမၧၫ့ လၧယမံၩ့အဖၧၩ့နီၪ, ဆၧလဖၪယီၩ ဘၪဆၧကွ့ၭအၥၭလီၫ.